Tsy mbola manomboka ny fitrandrahana raha tsy efa tafajoro ny ozinina hanodinana ny akora, hoy izy. Amin’ny fiandohan’ny taona 2020 izao no hanomboka ny fanamboarana ny ozinina. Nanazava ny tsy mampitombina ireo ahiahy rehetra mikasika ny toeram-pitrandrahana ihany koa ny tenany ka nilaza mazava fa tsy mitombina velively ny filazana fa tafiditra ao anatin’ny toeram-pitrandrahana ny alan’ny Mikea. Tsy voakitika ary tsy nahazoana alalana mihitsy izany hatreto, hoy izy. Ho mariky ny fangaraharana dia napetraka eo anivon’ny kaominina sy ny fokontany voakasiky ny fitrandrahana avokoa ireo bokin’andraikitra mifehy ny orinasa sy ny andraikitra takiana amin’ny lafiny tontolo iainana, hoy ihany ny tale jeneraly. Tsiahivina fa tamin’ny 21 martsa 2012 no nahazo ny fahazoan-dalana hitrandraka fasimainty ao Ranobe ny orinasa Base Toliara saingy hatreto dia mbola anatin’ny fanadihadiana ny toetany sy ny toerana hametrahana ny ozinina izy ireo.